Cilmi-baaris: Ma sidataa magac carbeed u diyaar garow faqooq suuqa shaqada ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sima Wolgast,oo ka howl-gasha jaamicadda Lund. sawir: Natacha López/Sveriges Radio
La cusbooneeyay torsdag 11 januari kl 13.02
La daabacay torsdag 11 januari kl 10.41
Cilmi-baaris laga sameeyay jaamicadda Lund ayay ku caddaatay in muddada lagu jiro shaqaaleeynta lagu faqooqo suuqa shaqada dadyoowga shaqa-doonka ah ee asal ahaan ka soo jeeda waddammada carabta. Falalka faqooqa ayaa u dhaca siyaabo kala duwan.
Sima Wolgast oo ku takhasustay culuunta maskaxda ayaa isku day ku sameeysay tallaabada ugu horreeysa ee lagu kala saaro dadka shaqada soo dalbada, halkaasina oo ay ugu caddaatay in dadyoowga sita magacda carabta si ka duwan tusaale ahaan wareeysiyada loola yeesho ama su’aalaha loo weeydiiyo.
–Kolka dadyoowga la wareeysaneyo ey sitaan magacyo u dhawaaqeya sida carabta waxaa xoogga lagu saaraa wareeysiga su’aalaha la xiriira kartidooda la dhaqanka bulshada, hab-dhaqan fikireedka iyo kartidooda wada shaqeeyn. Tusaale ahaan maxaad ka aamin-san tahay hab-dhaqan fikireedkayaga, hab-fikirka Sweden, iyo moraalka. Halka dadka sita magacyada iswiidhishka la doorbido in la weeydiiyo su’aalaha la xiriira hab-dhaqankooda kolka shaqadu ay degdeg u socoto ama kadeed la galo, habka iska hor-imaadyada loo xaliyo, su’aalo ku wajahan shaqada.
Baaristan ayay Sima Wolgast ku wareeysatay 50-tameeyo shaqa-bixiye iney diyaariyaan bal su’aalaha ey weeydiiyaan iswiidhishka iyo dadka sita magacyada carabta ee shaqada raadineya, halkaasina oo ay ka caddaatay in dadyoowga sita magacyada carabta la weeydiiyo ka bax-san yihiin kartidooda xirfadeed. Kadib ayaa koox kale oo shaqa-bixiye waxey qiimeeyeen labada hab su’aallood tumaa wanaag-san sidii shaqaale ku habboon lagu heli lahaa, iyadoona ay jawaabtii noqotay xogta la xiriirta kartida xirfadda. Waana su’aalaha aan inta badan la weeydiin shaqa-doonaha sita magaca carbeed.
–Markaa wuxuu falkaasi noqonayaa faqooq.
Cilmi-baaristii saddexaad ayaa eegtay tallaabadii ugu dambeeysay ee shaqaaleeynta – iyadoona badankood uu shaqa-bixiyuhu meesha ka saarey shaqa-doonihii sitay magaca carbeed ama ay u ekeeyd inuu ka soo jeedo Bariga Dhexe, xitaa haddii barnaamij kombiyuuterka ah oo dadkaasi markii hore kala saarey uu xirfaddooda heer sare ku qiimeeyay.
–Magacyada iswiidhishka ayaa laga door bidaa kuwa carabta, xitaa haddii ey ka xirfad liitaan, oo xitaa haddii wareeysi la isugu yeero waxaa jiri kara faqooq sababa in qof kale lagu doorto..
Laakiin maxaa heerkan faqooqa loo sameeyaa?
–Waxaan u maleeynayaa inay ka dambeeyso in koox la lixa jecleeysto, kooxda laga soo jeedo, maadaama shaqa-bixiyuha badankood ey yihiin iswiidhish.
Goorta keliya ee aan la faqooqin dadyoowga sita magacyada carabta waxay ahayd kolkii looga digey in xirfadda un la isku doorto, haddii kale dib loogu noqon doono kala doorashada.
–Marka waa inuu jiraa nidaam lagu kontroolo oo qeexaya ama oranaya in si cadaalad ah wax loo kala xusho, haddii kale waxaa ka imanaya masuuliyad.
Ma la kulantay su'aalaha noocan ah?